ခ်စ္တဲ့ပရိတ္သတ္ေတြအေနနဲ႕ သူ႕ကိုတိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိေစမယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ေျပာျပလာတဲ့ ေအာင္ေရခ်မ္း - Voice Of Burma
ဒါ့ေၾကာင့္ MRTV-4 မွာျပန္လႊင့္ေနတဲ့ ပ်ားရည္အိုင္ဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့ ကိုတင္ေဖကို ပရိသတ္ေတြကအားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၿပီး အားေပးၾကမ္းေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ ကိုတင္ေဖက ” ဆီသည္ေလးျဖစ္သြားပါၿပီခဗ်ာ ??????ဒီလအတြင္း မွယူပါက ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္အိမ္အေရာက္လာပို႔ေပးပါမယ္ ???ဖုန္းဆက္ၿပီးမွာလိုက္႐ုံဘဲ ??? ” ဆိုၿပီး ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ပရိသတ္ႀကီးနဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးေလးကို အစျပဳေနတဲ့ ကိုတင္ေဖကို ပရိသတ္ႀကီးလည္း အားေပးလိုက္ၾကပါအုံးေနာ္..။
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော အောင်ရေချမ်းကတော့ MRTV_4 ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ လူသိများလာပြီးခုချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်.. အောင်ရေချမ်းကတော့ ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တတ်ပြီး ပီပြင်တာကြောင့် အောင်ရေချမ်းကိုအားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း အများအပြားပါပဲနော်.. အောင်ရေချမ်းဟာ လတ်တလောမှာတော့ ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ လူနာရှင်တွေအတွက် လုပ်အား၊ငွေအားများဖြင့် ကူညီပေးနေပါတယ်နော်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းမှုမှာ‌တော့အောင်ရေချမ်းကအလှူတွေလိုက်လုပ်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေဘက်ကနေရပ်တည်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ နိုင်ငံရေးကြောင့်ရော ကိုဗစ်ပိုးတွေကြောင့်ရော အလုပ်တွေအကုန်နားထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွှာအသီးသီးကလူတွေအားလုံးလည်း စီးပွားရေးကျပ်တည်းကုန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. အနုပညာရှင်တွေလည်း အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ နားထားရတာကြောင့် ဇာတ်ကားအသစ်တွေ ထွက်ရှိခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် ဇာတ်လမ်းတွဲအဟောင်းများပဲ ပရိသတ်တွေ ကြည့်လို့ရနိုင်သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒါ့ကြောင့် MRTV-4 မှာပြန်လွှင့်နေတဲ့ ပျားရည်အိုင်ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ကိုတင်ဖေကို ပရိသတ်တွေကအားမလိုအားမရ ဖြစ်နေပြီး အားပေးကြမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့ ကိုတင်ဖေက ” ဆီသည်လေးဖြစ်သွားပါပြီခဗျာ ??????ဒီလအတွင်း မှယူပါက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အိမ်အရောက်လာပို့ပေးပါမယ် ???ဖုန်းဆက်ပြီးမှာလိုက်ရုံဘဲ ??? ” ဆိုပြီး ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဖို့ကြိုးစားရင်း ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးကို အစပြုနေတဲ့ ကိုတင်ဖေကို ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးလိုက်ကြပါအုံးနော်..။
အရမ္းခ်စ္ရတဲ့ ဖခင္ႀကီးရဲ႕ေမြးေန႕ေလးကို အေဝးတစ္ေနရာကေန ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္တဲ့ ေတးသံရွင္ R ဇာနည္
အမှန်တကယ် အသက်၀င်လာပြီဖြစ်သော DR.ဇော်ဝေစိုး၏ သတိပေးစကားများ